Sida loo Beddelaan MKV in MP4 la Loss Tayada Zero on Windows iyo Mac
Waxaa jira digital badan oo qaabab video adduunka oo video kaydinta. Dhammaan qaabab kala duwan videos 'leeyihiin barwaaqo shaqsi, isticmaalka iyo ka faa'idaysigiisa. Sida MKV taageeri karaan movie 1080p la taageero cutubka, rikoodh audio 2ch, 5.1 audio, 5.1 audio la faallo ah oo MP4 ma sheegi karo. Sida barbar MKV qaab MP4 ku jira fudud badan file video, laakiin MP4 waxaa si balaadhan looga isticmaalaa in qalabka warbaahinta la qaadan karo oo la dhisay taageero file.
Codsiyada multimedia badan iyo qalabka warbaahinta la qaadan karo ma taageeri qaab MKV sida iPhone, iPod, iPad iyo PS3. Wixii qalabka multimedia sida aan looga baahan yahay in loogu badalo MKV qaab doorasho MP4 ugu fiican.
Maqaalkani waxa uu ka caawin doona in aad "Sida loo badalo files MKV in MP4 qalabka warbaahinta kala duwan aad.
Qeybta 1: Best MKV in MP4 Video Converter for Windows (Windows 10 ka mid) / Mac
Qeybta 2: MKV Free in Converter MP4
Qeybta 3: MKV Online in Converter MP4
Qeybta 4: Dooro MKV in MP4 Video Converter in aad xaq u leedahay in aad ka u
Qeybta 5: Aqoonta Extended Wixii MKV iyo MP4.
Waxaa jira software kala duwan video Converter dhaqanka laga heli karo suuqa oo si MP4 badalo karaa MKV laakiin Wondershare Video Converter Ultimate barayaa qaababka badan oo gaar ah oo waxtar leh oo ay ku jiraan video diinta.
30X dhakhso Video Conversion.
Zero khasaaro Tayada. Dhisay taageero DLNA
159 qaabab taageeray. Download YouTube Video
Durduri files warbaahinta on PC ah in aad TV.
Edit, In kor loo qaado, iyo shakhsiyeeyo Media.
Guba CD iyo DVD
Beddelaan 2D videos in qaab 3D xawaare ultrafast
Easy in ay isticmaalaan la User saaxiibtinimo is-dhexgal
Taageerayaan Operating System, Windows 10/8/7 / XP / Vista Mac OS X 10.6, 10.7 10.8, 10.9
Step By Step Guide for MKV in Converter MP4 Isticmaalka Wondershare Video Converter Ultimate
Ka dib markii tallaabooyin deg deg ah ku tusaan sida loo badalo files MKV si aad u MP4 gujinaya kaliya badhamada yar.
Tallaabada 1 MKV Add File
Run aad " Wondershare Video Converter Ultimate ", by default" Beddelaan "tuubada muuqan doona hortaada. Hadda dari aad MKV warbaahinta faylasha aad rabto in aad si loogu badalo in MP4. Wixii intaa raaciyay file click on "Add Files" on geeska bidix ee sare ama screen dhexe. Waxaad kaloo isticmaali kartaa "Jiid iyo dejinta" for files aad ka folder file.
Ka dib markii ay doortaan "Add File" window kale ka muuqan doontaa, dooro meesha aad u socoto file in aad computer iyo dooro "Open".
Tallaabada 2 Dooro sida aad Output Video Qaabka MP4
Ka dib markii Dooro file aad beegsaday aad u leedahay in ay doortaan MP4 sida qaab wax soo saarka aad looga baahan yahay.
Ujeedada in aad leedahay si aad guji hoos ku qoran "Qaabka Output".
Tab Qaabka Select ka soo daadiyaa menu.
Under Qaabka dooro "Video".
Qaar badan oo ay taageerayaan qaab u muuqan in sanduuqa in "MP4 Video" xulo xiddiga bookmark ku icon taas oo ah qaab MP4 caadiga ah.
Haddii aad dareento waxa ay adag tahay in la helo qaab in raac talaabooyinka this.
Riix hoos ku qoran "Qaabka Output".
Laga soo daadiyaa menu click on tab search (galaas weyn icon)
Ku qor "MP4" sanduuqa raadinta
Dhammaan noocyada file MP4 ka dhex muuqan doonaa sanduuqa
Dooro "Video MP4" la icon bookmark (sida qaabka caadiga ah)
Tallaabada 3 Start Hab-badalo
Iyo tallaabadii u dambaysay, laakiin ma yaraan ka dib markii ay doortaan qaab wax soo saarka sida aad doonayso inaad wax yar ka dooro "badalo" button iyo diinta file aad ku bilaaban doono.
By gujinaya "Folder Open" waxaad ka heli kartaa meesha faylasha la gediyay ayaa la badbaadiyey. Waxa kale oo aad ka bedeli kartaa gal meesha aad rabto si uu u badbaadiyo files gediyay.
Tallaabada 4 Edit iyo Customised Your Video (Ikhtiyaar)
Sida aan soo magacawnay ka hor "Wondershare Video Converter Ultimate" waxaa ka mid ah dad badan oo fursadaha fanaaniinta oo aad video qurux badan, kartoo iyo editable ka hor inta aadan badalo faylka.
Ka dib "Tallaabada 2" ka hor inta bilaabi diinta ka dooro "Edit" button
An suuqa kala yar editable muuqan. Waxaad isticmaali kartaa qaababka kala duwan oo muhiim ah tusaale ahaan
"Jar" ​​jaray video ay u dheer.
"Dheellitir" Dalagyada, shaandheyn goob jir iyo xallinta.
"Saamaynta" Volume, qabsiga Colour iyo Frames.
"Watermark" daro qoraalka / Image on video nuqul xaq iwm
"Cinwaan" dari Cinwaan shaashadda.
Ka dib markii aad la doonayo beddelo laga yaabaa in aad u baahan tahay, guji "badalo" badhanka si ay u bilaabaan diinta video.
Wondershare Video Converter Free waa AVI ugu wanaagsan lacag la'aan ah si ay u Converter MP4. Waxaad si xor ah kala soo bixi kartaa software this website-kayaga oo mar kasta u isticmaalaan. Aawadood ha in aad awoodid in ku dhowaad badalo qaab kasta oo qaab video kasta oo ay feature free editable qurux badan. In ka badan laga badalay, oo ay baadad muhiim ah kuwo aad u soo jiidasho leh.
Beddelaan ku dhowaad dhammaan qaab caan ah.
Guba CD iyo DVD.
Download kasta oo Video ka YouTube iyo website-yada kale.
Easy in ay isticmaalaan la User saaxiibtinimo falgal.
Dhibaatada kaliya la free version tani waa:
Waxa aanu taageeraan aan qalabka la qaadi karo.
The tayada wax soo saarka video hoos waxoogaa yar.
Xawaaraha diinta ma aha si deg deg ah.
Si looga hortago dhibaatooyinka kor ku xusan, waxaad dooran kartaa in ay soo iibsato ugu Wondershare Video Converter Ultimate version sare.
Step By Step Guide for MKV in Converter MP4 Isticmaalka Wondershare Video Converter Free
Software falgal dhab ahaantii waa user saaxiibtinimo loo isticmaalo. Ka dib markii tallaabooyin deg deg ah ku tusaan sida loo badalo files MKV si aad u MP4 gujinaya kaliya badhamada yar.
Hadda dari aad MKV warbaahinta faylasha aad rabto in aad si loogu badalo in MP4. Wixii intaa raaciyay file click on "Add Files" on geeska bidix ee sare ama screen dhexe. Waxaad kaloo isticmaali kartaa "Jiid iyo dejinta" for files aad ka folder file.
Haddii aad dareento waxa ay adag tahay in la helo qaab gaar ah oo aad isticmaali karto doorasho search (weynaynaya galaas icon) goobidda deg deg ah.
Sida aan soo magacawnay ka hor "Wondershare Free Video Converter" waxaa ka mid ah dad badan oo fursadaha fanaaniinta oo aad video qurux badan, kartoo iyo editable ka hor inta aadan badalo faylka.
"Dalag" Dalagyada, shaandheyn goob jir iyo xallinta.
"Saamaynta" midab kala duwan oo saamayn ku dari kartaa galay video.
MKV Online in Converter MP4
MKV Free in Converter MP4
Best MKV in MP4 Video Converter
File MKV guud ahaan waa files "Matroska". Kuwa ku jira audio (filimada) ama video oo kaliya. File MKV waa baqshad kaas oo waxaa jiri kara dad badan oo Cajalado, videos iyo subtitles qaylo, jidaynayey user ay u kaydiso movie dhamaystiran la subtitles.
MP4 waa kordhin files multimedia, kaas oo ah qaab weel oo keydin karta oo video, audio iyo xogta Cinwaan (iyo sidoo kale in ka badan ku xiran tahay content) a. Waxa uu noqday sayniska dheeraad ah oo ku caan ah dukaamada sida Lugood isticmaalaa qaab weel tan, oo loo isticmaalo la iPod iyo Playstation la qaadan karo (PSP) sida dhisay taageero, files MP4 waxay noqdeen in ka badan oo caan ah.
VLC, KMPlayer, ALLPlayer, Elmedia, gacan-jabis,
Pinnacle Studio, PowerDVD iyo qaar badan oo
MIME Type Video Video, Guuritaanka-image, Sound, Aggregate,
MKV Description File Guryaha iyo
website MKV sameeysa
macluumaad faa'iido leh oo ku saabsan farsamo MKV
Sida loo badalo MKV in AVI
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan MP4
sida loo ciyaaro MP4 on Galaxy S4
Sida loo dar subtitles in Files MP4
Sida loo Beddelaan MP4 in iPad (iPad Air ka mid ah)
Sidee si loogu badalo qaab file ARF in MP4 la Loss Tayada Zero
Sida loo Beddelaan MP4 ah in File OGV ah?
MPEG4 vs MP4, Faraqa u dhexeeya MPEG4 iyo MP4
> Resource > MP4 > Best MKV Free iyo Online in converters MP4 on Windows iyo Mac